Igba Iron Teapot Manufacturers - China Nkedo Iron Teapot Suppliers & Factory
nkedo ígwè teapot
igba ígwè teapot N'etiti ọtụtụ enameled tii tent, ọcha, siri na-egbuke egbuke, pụrụ iji tụnyere poselin teacups; eji ntupu ma ọ bụ ntanye agba chọọ ya mma, ọkwa ahụkwa doro anya, na-eji ikike nka siri ike karịa; ìhè style, pụrụ iche udi nke drum ekara tii iko na urukurubụba ekara tii iko; nwere ike rụọ ọrụ na nchekwa ọkụ, ma dị mfe iburu, enwere ike iji ya na-etinye tii, teaups with enamel enamel Tea plate, site na ọtụtụ ndị tii na-anabata. Otú ọ dị, Enamel tii esetịpụ okpomọkụ nyefe fas ...
cast cast teapot Roughly in the Yuan Dynasty, nkà na ụzụ enamel malitere ịgbasa na China. Ejiri cloisonne enameled tea mee n'oge Jingtai nke Ming Dynasty (1450-456), nke enwere ike ịkpọ "enamel inlaid handicraft". N'oge ọchịchị Emperor Qianlong nke Qing Dynasty (1736-1795), cloisonne enamel malitere ịgbasa site na obí eze ruo ndị mmadụ. Enwere ike ịsị na nke a bụ mmalite nke ụlọ ọrụ enamel China. Na mmalite narị afọ nke 20, enamel t ...
Nkedo ígwè teapot enameled 1800ML Nsogbu na Yuan Dynasty, enamel technology malitere igbasa na China. Ejiri cloisonne enameled tea mee n'oge Jingtai nke Ming Dynasty (1450-456), nke enwere ike ịkpọ "enamel inlaid handicraft". N'oge ọchịchị Emperor Qianlong nke Qing Dynasty (1736-1795), cloisonne enamel malitere ịgbasa site na obí eze ruo ndị mmadụ. Enwere ike ịsị na nke a bụ mmalite nke ụlọ ọrụ enamel China. Na mbido 20 c ...
Cast teapot tea enameled 1800ML Ancient Egypt bu mbido nke enamel, ma mesịa webata ya na Europe. Ihe nkedo nkedo a na-ejikarị eme ihe taa sitere na Germany na Austria na mmalite narị afọ nke 19. N’ime nke usoro ndị eze Yuan, teknụzụ enamel malitere ịgbasa na China. Ejiri cloisonne enameled tea mee n'oge Jingtai nke Ming Dynasty (1450-456), nke enwere ike ịkpọ "enamel inlaid handicraft". N'oge ọchịchị Emperor Qianlong nke Qing Dynasty (173 ...
Irongwè nkedo teapot enameled 800ML Ancient Egypt bu mbido nke enamel, ma mesịa webata ya na Europe. Ihe nkedo nkedo a na-ejikarị eme ihe taa sitere na Germany na Austria na mmalite narị afọ nke 19. N’ime nke usoro ndị eze Yuan, teknụzụ enamel malitere ịgbasa na China. Ejiri cloisonne enameled tea mee n'oge Jingtai nke Ming Dynasty (1450-456), nke enwere ike ịkpọ "enamel inlaid handicraft". N'oge ọchịchị nke Emperor Qianlong nke Qing Dynasty (1736 ...
Igba ígwè teapot enameled 500ML